Ukwaziswa Kokuthutha Okushusayo Kwi-Analytics Yakho? - Buza okumele ukwenze
UJulia Vashneva, umphathi we-8 (Semalt oyiMenenja yeMpumelelo yeMakhasimende Ephezulu, ukholelwa ukuthi i-darodar.com yisona sizathu esiyinhloko sokuthi kungani iwebhusayithi yakho ithola iningi lezimoto zokudlulisela emuva, futhi iforamu.topicxxxxxxx.darodar.com ingayichitha yakho idumela lesayithi kwi-inthanethi ezinsukwini ezizayo - скамеечка для ног. Yingakho kufanele uzibuze ukuthi yini okufanele ukwenze ukuze ususe le nkinga. Ingabe ingumzimba wakho wesisu? Kuyiqiniso ukuthi ulikopishe futhi ulifake kusiphequluli sakho sewebhu. Ngenxa yalokho, kubangele izinkinga futhi bakulethe amakhasi Aliexpress (inkampani ephethwe ngu-Alibaba). Lapha uzothola izinto zeholide kanye nezinhlinzeko ezithengisiwe ngenani elibalulekile.
Uma kuziwa ekuchofozeni okuthunyelwe ngqo kumathuluzi we-webmaster, kuzokuletha ku-darodar.com, kulandelwe ngokukuqondisa kabusha kuwebhusayithi yeRussia eyaziwa ngokuthi iloveitaly.ru. Ngemuva kwalokhu, uzoqondiswa kabusha kuma-subdomains Aliexpress anezintambo ezithile ekugcineni "aff_platform = aaf & sk = YNRjYvfmq: & cpt = 1420754856013 & null;."
Unesithakazelo sokwazi incazelo yalo? Lokhu kusho ukuthi ikhompiyutha yakho ikhishwe futhi iwebhusayithi yakho ithola i-darodar.com yokudlulisela ithrafikhi..Ngisho noma uthenga izinhlelo nezinhlelo zokusebenza, imiphumela ngeke ibe njengoba kulindelwe futhi ithrafikhi yokudluliswa izobonisa ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. I-hacker ingase izame ukushayela ithrafikhi eliphakeme kakhulu kwiwebhusayithi yakho ngethemba lokuthi othile uzothenga imikhiqizo kusuka kuzixhumanisi ezikhonjisiwe. Indlela abaduni beba ngayo imininingwane yakho futhi bafika ku-Google Analytics yakho? Impendulo elula yukuthi baye bahamba ngezimoto. Kukhona ama-spammers e-traffic faker e-script ahlukahlukene abasebenzisa ukukhohlisa abasebenzisi, evumela ukuba bakuthumele ithrafikhi enonya futhi bachithe idumela lakho lesayithi. Uzobona njalo labo abathumela amanga ku-Google Analytics yakho ngoba baqhubeka bekhohlisa abasebenzisi kanye ne-Google nxazonke.
Kuleso simo, umqaphi ozama ukungena kwisayithi lakho angase akwazi ukuthengisa okuthile ngokusebenzisa isixhumanisi sakhe futhi angakwazi ukukhiqiza inzuzo eningi. Ngeshwa, abathengisi basebenzisa i-darodar.com yokudluliswa kwemoto kanye nesofthiwe yokukhohlisa ukukhuthaza imikhiqizo yakho. Bafuna ukuguqula izivakashi zabo kumakhasimende nokuzikhohlisa ngezindlela eziningi. Isibonelo esisodwa sigaxekile esingapheli senkampani okuthiwa yi-Cenoval.
Lesi sakhiwo senze inombolo enkulu yokuphambaniswa kwezingcingo ezingeni elibi futhi lisetshenziselwa amagciwane anesisindo kanye ne-malware yokuphanga amakhompyutha wakho. Ithumela ithrafikhi enonya kumakhasimende ayo, kepha i-traffic efanayo iyabonakala nezinhlelo zokudluliselwa kwe-darodar.com futhi. Ngakho-ke, kufanele uhlale kude kokubili i-darodar.com ne-cenoval.ru, uqinisekise ukuphepha kwesayithi lakho kwi-intanethi.
Ngokuvamile, indlela efanele kakhulu, engcono kakhulu futhi engabizi kakhulu yokubhekana nalezi zinkinga idala izihlungi. Isihlungi sizokusiza ukuthi ususe ugaxekile ku-Google Analytics idatha yakho. Ngaphandle kwalokho, ungashintsha izilungiselelo kwifayili ye-.htaccess. Lezi zinsuku, abakwa-webmasters basebenzisa kokubili lokhu okukhethwa kukho ukuvimbela abaduni ukuba bangabe imininingwane yabo ebucayi. Ungazama futhi lezi zindlela ezimbili, kodwa ngincoma ukuthi udale izihlungi ezihlukile kwiwebhusayithi ngayinye. Zama noma iyiphi yalezi zindlela futhi uqinisekise ukuphepha kwesayithi lakho.